Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2007
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Desambra, 2007
Marôka : Krismasy any Maghreba
Maraoka17 Desambra 2007
Ny dia ny fivavahana Silamo aza no fivavahan'ny ankamaroan'ny mponina any Marôka ary na dia mbola herinandro faharoan'ny Desambra [Advento] aza isika dia manimanitra Noely sahady any an-toerana – fara-faharatsiny eo anivon'ireo mpiblaogy vahiny monina any Marôka. Ny blaogy Connie in Morocco, izay mpiasa an-tsitrapo “Peace Corps” dia miroaroa hevitra...
Egypta : Fanolànana nodidian'ny Pôlisy
Ejipta08 Desambra 2007
Ny blaogy The Arabist avy any Egypta dia mitatitra ny fitarainan'ireto zatovo roa izay mandrohirohy Pôlisy roa izay nandidy ny mpiara-migadra tamin'izy ireo mba hanolana ireto zatovo : « Does it ever stop? The number of cases of torture and worse in Egyptian police stations that have come to light in recent...
Iran : “Nahoana no tsy Yahoo no toerana tandrify ?”
Iràna07 Desambra 2007
Ny mpiblaogy Kourosh Ziabari izay monina any Iran dia manohy ny tolona ataony mba hamerenan'ny vohikala Yahoo mail an'i Iran anivon'ireo firenena azo isafidianana [Farsi], dia nametraka ary ny tetikasa “Hello Yahoo Project” izay hetsika ivondronan'ireo Iraniana rehetra izay tezitra tamin'ny fihetsik'i Yahoo mba hamafa tsy hampiasa intsony ny Yahoo...
Ejipta06 Desambra 2007
Nandritra ny fotoam-pamaranana ireo andiam-pivoriana niompana tamin'ireo sehatra vaovao hoan'ny seraseram-pifandraisana izay notarihiko tany Aleksandria, tany Egypta, saika izay rehetra nandray fitenenana dia nidera an-dRamatoa Shahinaz Abdelsalam, izay maro mpahalala anivon'ny Blaogôsfera amin'ny anaram-bosotra hoe Wahda Masrya – tovovavy Egyptiana. Izy irery no mba hany tera-tany avy ao Aleksandria sady...
Egypta : Momban'ny tantaran'ilay totozy manidina
Fony isika mbola zaza dia samy nijery ireny sarimihetsika an-tsariitatra natao hoan'ny ankizy na “dessins animés” ireny. Raha ny tena marina dia maro amintsika no mbola tia mijery ireny na dia efa izao lehibe izao aza. Ary tsindraindray ny sasany amin'izy ireny dia mifahatra ao an-tsaintsika ao ary manana fiantraikany amin'ny fiainantsika aza. Ny mpiblaogy Captain...
Egypta : Maharay 100$ isam-bolana ny mpiblaogy Kareem
Ejipta05 Desambra 2007
Ny hetsika izay mitaky Fahafahana hoan'i Kareem [freekareem.org] dia mamatsy an'i Kareem Sulaiman (migadra) 100$ isam-bolana avy amin'ny ireo vola voangona avy amin'ireo mpanohana sesehena eran-tany. Tsahivina fa ny fahadisoana nanamelohana ny mpiblaogy Egyptiana Kareem Sulaiman higadra higadra efatra taona dia ny « fanalam-baraka » ny fivavahana Mozolmanà sy ny...
Masoarabo: Henakisoa Halal
Bahrain01 Desambra 2007
Ny tena dikan’ny teny hoe masoarabo eto moa dia hoe “fomba fijery arabo”. Ny Silamo, tahaka ny Jodaisma dia mandrara ny mpikambana ao aminy tsy hihinana henakisoa. Saingy inona moa no hitranga raha misy tsahotsaho fa misy fanomezandalana ara-pivavahana na ‘Halal’ hita eny an-tsena? Ity misy adihevitra nataona mpamaham-bolongana sy...